di Davide Sabbatini - November 1, 2021
N'echi, Nọvemba 2, ndị Ụka na-echeta ndị akwụrụi.
La ncheta nke ndi nwuru anwu - 'party of reparation' kwupụta ndị na-enweghị ebe ịchụàjà - ọ bụ n'ihi na 998 ka ụzọ nke Sant'Odilone, abbot nke Cluny.
Ụlọ ọrụ a abụghị n'onwe ya na-anọchite anya eziokwu ọhụrụ maka Ụka, nke na-ejibu eme ememe ncheta nke ndị nwụrụ anwụ n'ụbọchị na-esote oriri nke ndị nsọ niile.
Otú ọ dị, ihe dị mkpa bụ na otu narị ebe obibi ndị mọnk na-adabere na nke Cluny na-enye aka n'ịgbasa ememe a n'ọtụtụ akụkụ nke ugwu Europe. Nke ukwuu nke na na 1311, ọbụna Rome iwu kwadoro ncheta nke ndị nwụrụ anwụ.
Ntughari na-ebute ụzọ ụbọchị itoolu nke nkwadebe na ekpere maka ndị nwụrụ anwụ: ihe a na-akpọ novena maka ndị nwụrụ anwụ, nke malitere na 24 October. Ohere nke inweta mmekpa ahụ nke akụkụ ma ọ bụ nke zuru oke, dị ka ihe ngosi nke Chọọchị Katọlik si dị, jikọtara ya na ememe ncheta nke ndị nwụrụ anwụ.
N’Ịtali, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ewere ya dị ka ememe ọha, ọ dịbeghị mgbe e guzobere ememe ncheta nke ndị nwụrụ anwụ dị ka ememe obodo.